आँचल शर्माको दाबी, ‘उदिप मिल्ने साथी मात्र हो’ « Ramailo छ
आँचल शर्माको दाबी, ‘उदिप मिल्ने साथी मात्र हो’
फिल्म नगरीमा मात्रै नभएर दर्शकमाझ पनि आँप जोडी चर्चित छ । आँप अर्थात् आँचल शर्मा र पल शाह । दर्जनौं म्युजिक भिडियो र तीन वटा फिल्ममा एकसाथ काम गरेक आँचल र पललाई रियल जोडी मान्ने धेरै छन् । तर ‘आँप जोडी’ मिल्ने साथी भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।
यस्तैमा नायिका आँचल शर्माले उदिप श्रेष्ठलाई आफ्नो इन्स्टाग्राममा वेस्ट फ्रेन्ड भन्दै स्टोरी हालेकी छिन्, जसको चर्चा एकान दुई कान हुँदै मैदान भएको छ । आफ्नो स्टोरीमा खासै अरुलाई नअटाउने आँचलले यी युवालाई बेस्ट फ्रेन्ड भन्दै स्टोरीमा राख्नुले कतै दुई बिच केही त पाकिरहेको छैन भन्ने आशंका धेरैले गरेका छन् ।
तर आँचलले एउटा तस्बिर स्टोरीमा राख्दैमा प्रेमी नहुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘इन्स्टाग्राम स्टोरीमा फोटो राख्दैमा प्रेमी हुन्छ भन्ने हुँदैन । ऊ मेरो मिल्ने साथी मात्र हो । हामी बिच त्यस्तो केहि छैन ।’
आँचल र उदिप बिचको सम्बन्ध के होला त ? के उनीहरु मिल्ने साथी मात्रै होलान् त ? यो रहस्य विस्तारै खुल्दै जाला ।